Ukwahlukahlukana phakathi koKhupha nokuPakisha
Ukukhawulela Akunjalo Kanye neKayaking neCanoeing!
Kubantu abaninzi, ukugubha kunye nokuhamba ngeyona nto yinto efanayo. Bathi baya kubeka umkhombe kwaye babize i-paddle i-oar. Ukuze uqiniseke, kukho umehluko omkhulu phakathi kokugungqa kunye neenqanawa okanye i-kayaking kunee-semantics.
Ngokuqinisekileyo, kukho ukufana okufana nokuhlala kwisikhephe esincinci esiphakanyiswa ngezandla ukudonsa nokuphosa iqhekeza emanzini okanye ukuba ezi zikebhe zinokukhwelisa i-solo okanye nabanye kwisikhephe.
Kodwa, ukuthetha ngezobuchwepheshe, yilapho ukufana phakathi kwezemidlalo ezimbini kuphelile kwaye ukungafani phakathi kokukhwela kunye nokugqithisa kubonakala.
Ulwahlulo phakathi kokuHlaba kunye nokuPaddling
Eyona ndlela efanelekileyo yokubonisa ukungafani mhlawumbi ukuluhlu nje. Emva kokufunda ngokukhawuleza kwezi ngongoma, kuya kuba yinto ecacileyo ngokucacileyo ukuba iinqanawa kunye ne-kayaks yimidlalo ehluke ngokupheleleyo kunokuba iinqwelo zokuhamba, izikebhe ezinqabileyo, kunye nezikratshi. Oku kuya kunceda ekuqondeni kwakho i- Olimpiki eCanoe / Kayak kunye ne- Olympic Rowing .
Ukwahluleka kokuqala phakathi kwe-padding kunye ne-rowing kusetyenziswa indlela esetyenziselwa ukuqhubela isikhephe. Iipaddles zisetyenziswe kwi-paddling. Iindleko zisetyenziselwa ukukhwela. Iipaddles zixhaphaza izikebhe ngendlela efanayo njengoko i-paddler ibhekene nayo. Iimpahla ziqhubela izikebhe ngendlela eyahlukileyo ukusuka endleleni i-rower ehleli ngayo.
Ngaphandle kwemida efanayo nomlinganiselo wokuqala kunye nokuyibeka kwimigqaliselo ethile, oku kuthetha ukuba abahambahambayo baya phambili ngelixa abahamba ngeenqanawa bebuyela emva.
Iipaddles aziqhotyoshelwanga nantoni na. Bahamba ngokukhululekile emoyeni kwaye baxhaswa kuphela ngezandla ze-paddler. Iigweba ezisetyenziselwa ukukhwela zixhomekeke kwisikhephe. Bahlala kwiibhokhwe ezisebenza njengefleccrum yokuchukumisa kunye nokudonsa ukunyakaza.
Indlela yokuqhubela i-paddling kunye ne-rowing nayo iyahluke ngokupheleleyo. Izibetho eziphambili ziqhutyelwa yintambo ye-paddler. Ukukhwabanisa ngokugqithiseleyo kubaluleke kakhulu kwimilenze kunye neengalo.
Ukuvumela imilenze ukuba yenze umsebenzi ekugubungeni izihlalo ngaphakathi kweenqanawa eziqhumayo kunye nezikratshi ziza kutshintsha kwaye zibuyele ukuze zivumele imilenze ukuba iqhube kunye nokushaywa. Izihlalo ngaphakathi kwee kayaks, iinqanawa kunye neengqungquthela zihleli.
Abadluli bama- kayak , ii- canoes , i-rafts, kunye ne- standup paddleboards . Iinqwelo ezikwinqanaba elinesisiphelo, amaqabunga, kunye nezikebhe.
Kwezinye iziganeko zokugquma kukhona into eyaziwa ngokuba yi coxswain, okanye i-cox nje. Lo mntu uhlala emva kwekhephe kwaye nguye kuphela umntu ohlala esikhepheni ojongene nohambo. I-cox ayisebenzisi i-oar. Endaweni yoko, lo mntu uphethe ukuqhuba isikebhe kunye nokugcina ixesha lamalungu abasebenzi. Ewe, kwinqanawa kunye ne-kayaking, akukho lilungu elinjalo njengabasebenzi.
Abagqithisi banako ukukhwela isikebhe ngokuchanekileyo kunye nomtya owodwa kunye kwicala elinye ukuba bafuna. Ekudongeni, kufuneka iileji ezimbini, enye kwicala ngalinye ukuhamba kwisikhephe ngendlela echanekileyo.
Unokwenza ukukhwela ekhaya okanye kwindawo yokuzivocavoca ngomqeqeshi othungayo. Akukho mqeqeshi we-paddling okanye indlela yokusebenza ngokuphumelelayo indlela yokuhamba ngekhaya.
Iinqanawa zokupasa kunye ne-kayaks ngumdlalo oqhelekileyo ofikeleleka kumntu oqhelekileyo kunokuba uqhube umkhombe oqhekezayo okanye ukukhwaza.
Ngoko, ngoku unengcamango yokuchasana phakathi kwezemidlalo zokugwedla kunye ne-paddle ezifana neenqanawa kunye ne-kayaking. Kubalulekile ukuba uqaphele noko ke ukuba olu luhlu lumehluko nje kuphela kwaye alukho ukuvuma okulungileyo. Zibini ezemidlalo yamanzi kwaye akukho ndlela efanelekileyo yokufumanisa oko kukubhetele kumgangatho wesizwe.
Indlela yokubopha iCanoe yakho okanye iKayak kwiRack Roof
Yintoni i-Dogleg Hole eGoli?
Leo Moon (iTransit) - I-Mood kunye neentleko
Isiqulatho okanye iSebenzi yeLizwi? Ukusetyenziswa kwegama
Imbali yeengoma zeNgoma 'iScarborough Fair'
Iingqungquthela Zintathu Zincinci: I-Tale Architectural Tale
ENew Hampshire Colony